ODM & OEM Sevhisi | Fukang
Kubva 1999, nyanzvi mukugadzira mhando dzose dzezvirongo
Pharmaceutical Pet Bhodhoro
Plastiki Chikafu Jar
Plastiki Spice Jar
Hdpe Plastiki Bhodhoro
Kumba > Kubata
Jekiseni kuumbwa kwebotle embryo
Jekiseni kuumbwa kwebotle embryo.
Kuvhara jekiseni kuumbwa
Kuvhara jekiseni kuumbwa.
Kurongedza uye kuendesa.
Iyo yakapera bhodhoro embryo inozopfuudzwa kune iyo bhodhoro ichivhuvhuta muchina kuburikidza neyekutakura bhandi, uye ipapo bhodhoro rinoumbwa mune rimwe nhanho kuburikidza nekurova kuumbwa maitiro. Iwo mabhodhoro preforms muchina maitiro ese majekiseni-akaumbwa. Kuumbwa uku kune maburi masere, zvinoreva kuti inogona kuburitsa zvidimbu zvisere zvePreforms panguva imwe, kugadzirwa kwekugadzira kwave kuri nani kwazvo. Iwo mabhodhoro preforms anozopfuudzwa neanotakura bhandi kumhepo inoridza muchina.
Chinyorwa Kuvhara bhodhoro
Otomatiki kunyora muchina 1.Put yekuisa mazita kutenderera mumushini, uye kumisikidza muchina kurudyi chinzvimbo 2.Isa mabhodhoro mumwe neumwe pabhandi rekutakura 3.Ibhodhoro rinozotevera rakatakura bhandi rekuendesa kunzvimbo yekunyora kuti upedze iwo otomatiki kunyora Bhodhoro preforms inoumba Iyo chivharo muchina maitiro ese jekiseni-akaumbwa. Kune Fomu imwe chete ine matanda mana, Muforoma imwe ine mativi matanhatu, Muforoma imwe ine matanda masere. huwandu hwakasiyana hwemakomba hwakabuda zvakasiyana. Kazhinji Imwe muforoma ine masere mhango, zvinobuda zuva nezuva zvinogona kusvika zviuru makumi maviri / zuva Kana iine mhango sere, zvinoreva kuti inogona kuburitsa zvidimbu zvisere zvePreforms panguva imwechete, kugona kwekugadzira kwave nani kwazvo. Iwo mabhodhoro preforms anozopfuudzwa neanotakura bhandi kumuridza muchina. Ruoko rwe robhoti rwoga rwunobata preforms yebhodhoro, ndokuiisa munzvimbo yekuratidzira yemuchina, wobva waiendesa kumuchina unofefetedza bhodhoro, Zadzisa kuputira mabhodhoro. PET Technological maitiro 1.Kurova mucheche 2. Kusunungurwa kwemwana 3. Imwe nhanho kuumbwa kwePET bhodhoro redumbu 4. Kuvhara bhodhoro
1. Kuumbwa kwehombodo embryo: izvo zvigadzirwa zvebhodhoro embryo inoiswa mumushini wekuumba jekiseni kutanga, uye iyo emburuyo embryo inoumbwa kuburikidza nehombodo embryo chakuvhe pane jekiseni kuumbwa muchina neiyo jekiseni kuumbwa maitiro. Makungu mana emubhodhoro anogona kugadzirwa panguva imwe chete. Iyo bhodhoro embryo inotarisa huremu, ruvara uye hupamhi hwebhodhoro. 2. Isa mucherechedzo wemabhodhoro pamushini unovhiringidza bhodhoro: mushure mekuumbwa kwemubhodhoro, inozoiswa pabhandi rekutakura wozoendeswa kumuchina wekufemera bhodhoro. Muchina unoridza unoisa nhumbu kubva kubhandi rekutakura pabhandi rekugadzira. 3. Bhodhoro embryo inogadzira bhodhoro: iyo emburu embryo inoendeswa kune bhodhoro chimiro chakuvhe kuburikidza neyekugadzira bhandi pane iyo bhodhoro inoputira muchina. Mushure memasekondi mashoma ekumirira, iyo bhodhoro embryo inozoumba yakagadzika chimiro bhodhoro. 4.Kuumbwa kwekuvharwa: izvo zvinhu zvechivharo zvinoiswa mumuchina wekujekesa jekiseni, uye chifukidziro chine dhayamita yakagadzika uye chimiro chinoumbwa pane chivharo chakuvhe kuburikidza neyakagadziriswa jekiseni.
Bhodhoro yekugadzira maitiro
Iyo chivharo muchina maitiro ese jekiseni-akaumbwa
Iyo cap muchina maitiro ese ejekiseni-akaumbwa. Kune Fomu imwe chete ine matanda mana, Muforoma imwe ine mativi matanhatu, Muforoma imwe ine matanda masere. huwandu hwakasiyana hwemakomba hwakabuda zvakasiyana. Kazhinji Mumwe muforoma ine masere mhango, zvinobuda zuva nezuva zvinogona kusvika zviuru makumi maviri / zuva.
Iyi ndiyo mitsara yedu yeungano otomatiki
Iyi ndiyo yedu otomatiki magungano mitsara. Mushure meiyo jekiseni kuumbwa muchina unoburitsa iyo parison, inotakurirwa kutakurwa neanotakura bhandi kuenda kumberi kweichivhuvhuta kuumbwa muchina, uye iro robhoti michina gungano inogadzira uye kurongedza kweakapedza chigadzirwa iro basa remushandi ndere kungogadzirisa, kutarisira uye kugadzirisa iyo otomatiki mutsara. usatore chikamu zvakananga mukuita uku; michina yese nemidziyo zvakabatana nekurova kwekushanda, maitiro ekugadzira anonyanya kuenderera.
Yedu yepamberi Ridzai richigadzirisa Machine zuva nezuva outputcan kusvika 10,000 / zuva.
Iye zvino taona muchina uyu Extrusion Blow Kuumba Muchina, Iyo extrusion yekuvhuvhuta kuumba maitiro anotanga kuburitsa iyo tubular preform kubva kumuchina mushure mekunge zvinhu zvanyungudika uye zvakapurindwa neiyo extruder; iyo preform painosvika pakatemerwa pakatarwa, chikamu chechubhu chinotorwa ndokuiswa muforoma yekurova, uye chakavharwa. Iyo furu yakamanikidzwa; mushure meizvozvo, mweya wakamanikidzwa wakaputirwa mukati meparison nekufema kamwene kunonyatsomisa chimiro chedumbu rekuumba, uye ipapo chakuvhe chinovhurwa kuti chibudise chigadzirwa. Mumwe muforoma ina inemipendero ina, otomatiki incision uye zuva nezuva goho inogona kusvika zviuru gumi / zuva.